1. Olee otú iji akuku Videos
1.1 n'Ubi on Windows
1.2 n'Ubi on Mac
1.4 n'Ubi Video Online
2. n'Ubi Dị Iche Iche Formats
2.1 n'Ubi MP4 File
2.2 n'Ubi AVI File
Ma gụọ 2.3 n'Ubi WMV File
2.4 n'Ubi FLV File
2.5 n'Ubi MKV File
2.6 n'Ubi XviD File
3. Ndị ọzọ Video Croppers
3.1 n'Ubi na iMovie
3.2 n'Ubi na Avidemux
3.3 n'Ubi na Final Cut Pro
4.1 n'Ubi iPhone Video
4.2 n'Ubi YouTube Video
Cropping ihe oyiyi pụtara iji wepụ otu akụkụ nke ihe oyiyi ahụ, ma zoo ihe ị na-achọghị na-ege ntị na-ahụ ma ọ bụ mesie dị iche iche ọcha n'ime oyiyi. Dị nnọọ ka Photoshop-enye anyị ohere ubi ka oyiyi, Final Cut Pro X-enye anyị ohere ubi na-akpụ akpụ na obere vidiyo, dị ka ị ga-amata ke ibuotikọ emi.
Otú ọ dị, tupu m na-egosi otú a mere, m mkpa ịkọwa otu n'ezie eziokwu dị mkpa banyere video: niile video eji ihe na-akpọ "ofu mkpebi." Ofu mkpebi pụtara na elu-definition video na-mgbe egosipụta na otu n'ime mmadụ abụọ nha:
1920 x 1080 pikselụ
N'adịghị ka ka oyiyi nke nwere ike ịbụ ọtụtụ puku pikselụ on a n'akụkụ, na obere vidiyo na-ekpochi ha n'ime otu n'ime ndị a abụọ nha. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị ubi a video clip, iji wepụ ihe ị na-adịghị amasị, fọdụrụ pikselụ na-emekarị abawanye jupụta eku. Akuku ukwuu na gị video clip ga-ele anya blurry, blocky, na n'ọnụ ga-ele anya ịrị-steepụ.
Aga m na-egosi gị ụzọ abụọ ka ubi a video clip ke ibuotikọ emi, onye na-ekwusi a elu oyiyi mma ma ebelata size nke etiti (akpọ "trimming") na ndị ọzọ na ihe jupụtara n'ime eku na ihe oyiyi ma ebelata oyiyi mma (na-akpọ "cropping"). Ị ga-esi bulie nke otu onye na-arụ ọrụ ndị kasị mma n'ihi na ị.
Trimming bụ usoro nke wepụ akụkụ ụfọdụ nke a video clip-enweghị na-agbanwe agbanwe na nke nke clip. Nke a retains kasị elu ego nke oyiyi mma.
Ka ihe atụ, ebe a ihe oyiyi - n'ikike nke Pond5 (www.pond5.com). Ka na-ekwu na anyị chọrọ iji mesie n'ọba na ọ bụghị mbara igwe.
Ihe kacha ụzọ mee nke a bụ pịa akara na ala n'akụkụ aka ekpe nke onyenlereanya na-ahọrọ "n'Ubi."
Nke a na-egosiputa cropping ngwaọrụ ke nkiri.
Pịa Kpaa bọtịnụ gbanye Kpaa mode. (Isiokwu a tụlere ewepụtụ na akuku. Aga m ekpuchi Ken Burns utịp ke a n'ọdịnihu isiokwu.)
Jidere otu n'ime-acha anụnụ anụnụ ntụpọ na ịdọrọ zoo akụkụ ụfọdụ nke etiti. M n'ozuzu jidere a nkuku, ma ọ bụla-acha anụnụ anụnụ ntụpọ ga-eme.
IHE: Pịa ma jide nhọrọ isi mgbe adọkpụpụta ka ịdọrọ abụghị n'ọnụ ma ọ bụ na nkuku. Pịa ma jide Mgbanwe isi ịrịọ mkpụbelata na otu akụkụ ruru ka eku.
Ịdọrọ ndị ọzọ nkuku ma ọ bụ n'ọnụ ka n'ihu ewepụtụ oyiyi.
Mgbe i trimmed oyiyi n'ụzọ ị chọrọ, pịa "Emela" button na n'elu nri akuku wepuÚ trimming mode.
Ọ bụrụ na ọ dịghị ọzọ clip bụ n'okpuru trimmed clip, ndabere ga-nwa.
Ma, n'ezie abụghị nwa, ọ bụ uzo. Ọ bụrụ na ị na-etinye ọzọ clip n'okpuru ya, ị ga-ahụ na ala clip idak trimmed oyiyi.
Trimming-enye anyị ohere zoo akụkụ ụfọdụ nke a video clip, na-enweghị na-agbanwe agbanwe image àgwà nke clip na-anọgide. Otú ọ dị, trimming mgbe niile na-emepụta uzo ngalaba n'ime ihe oyiyi.
Cropping-enye anyị ohere họrọ dị nnọọ otu akụkụ nke a video clip, na-enweghị na-eke ihe ọ bụla uzo ngalaba, ma, agbazee oyiyi mma.
E nwere ọtụtụ ụzọ anyị pụrụ ịhọrọ ubi ihe oyiyi:
Pịa akuku icon, dị ka anyị gosiri n'elu
Right-òké click (ma ọ bụ Control-click) n'ime onye nkiri na-ahọrọ
Ụdị Mgbanwe + C
* Na soja> Video tab> n'Ubi (a nhọrọ na-enye ndị kasị nkenke, ma na ọ dịghị ihe ọzọ kensinammuo iji)
Ọ bụrụ na ị họrọ ọ bụla nhọrọ ma e wezụga ndị soja, pịa n'Ubi bọtịnụ na nkiri.
Ugbu a, ịdọrọ a-acha anụnụ anụnụ button na otu nke nkuku. N'ihi na cropping, n'adịghị trimming, jupụtara n'ime ndị etiti na òkè nke oyiyi anyị họrọ, anyị nwere ike na-akpali nkuku na oyiyi na-mgbe sized ka dakọtara akụkụ ruru nke anyị usoro.
Final Cut ngosipụta nọmba na elu nke onye nkiri na-egosi otú ihe oyiyi e cropped.
Reposition eku site grabbing n'ime rektangulu na-adọkpụpụta.
Mgbe ị na-enwe obi ụtọ na-arụpụta, pịa Emela bọtịnụ na n'elu nri akuku.
Rịba ama na họrọ òkè nke image ugbu a jupụtara n'ime eku. Ọ bụ ezie na e nwere clip n'okpuru anyị cropped clip, anyị na-adịghị ahụ ya.
Ma, ọ bụrụ na i lee anya, ị ga-ahụ na cropped oyiyi bụ softer (blurrier) karịa mbụ na n'ọnụ ndị ọzọ yiri ka ịrị-steepụ.
Iji tọgharịa ihe cropped image azụ ya ndabere ntọala, na-emeghe soja na pịa obere curved akụ aka nri nke okwu ahụ bụ "ihe ubi."
Trimming na-eji iji zoo akụkụ ụfọdụ nke ihe oyiyi na superimpose ya n'elu ọzọ oyiyi.
Cropping a na-eji reframe ihe oyiyi, na-ekwu si a na-ajụ ogbugba iji a nso-elu, ma na-agba ihe ize ndụ nke gabiga ókè nro ihe oyiyi. The n'ozuzu-achị bụ na cropping a obere bụ OK, ma adịghị ubi ukwuu.
M na-eji ma ndị a usoro ugboro ugboro na m edezi.
Larry Jọdan bụ onye so na Directors Guild nke America, ndị na-emepụta Guild nke America na e dere ọtụtụ puku isiokwu na asatọ akwụkwọ ndị na-video edezi. Gaa Leta ya website na: www.larryjordan.biz.
# Nkwanye 1:
All-na-otu video edezi Software maka Mbido
• Great edezi Ọrụ, Eme & hazie gị Videos File.
• tọghata ọ bụla video ka editable usoro maka edezi.
# Nkwanye 2:
Nke a bụ isi nkuzi banyere Apple Final Cut Pro X, ọkachamara video edezi software. Otú ọ dị, ọ bụrụ na video edezi bụ ihe ọhụrụ nye gị, tụlee Wondershare Filmroa maka Mac (Si Wondershare Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac)). Nke a bụ ike ma mfe na-eji ngwá ọrụ maka ọrụ dị malite si. Download free ikpe version n'okpuru.
10 Jụụ Plugins maka Final Cut Pro X
Olee otú Mepụta a Foto dị na-na-Foto dị Mmetụta Iji Final Cut Pro X
FCP ka DVD: Olee Ọkụ Final Cut Pro Movies ka DVD
Tọghata AVCHD ka Final Cut Pro na Best Ogo
> Resource> FCP> Final Cut Pro X: Olee otú akuku ihe Image